Thelọ Petronas | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Kuala Lumpur, Ihe ị ga-ahụ
Otu n'ime ụlọ ngosi kacha ama ama na Malaysia bụ Ronlọ Petronas. O nwere ike ịbụ na ị maghị aha ya mana n'ezie ị hụla ọtụtụ ugboro profaịlụ abụọ na nke jikọrọ ọnụ nke ụlọ elu abụọ ndị a toro ogologo, akara nke obodo kamakwa nke ọgbara ọhụrụ.
Ihe eji mara umu anyi bu icho iru igwe ya mere otu n’ime skyscrapers kacha mara nma n’uwa. Ebee? Gbanye Kuala Lumpur. Ọ bụrụ na ị kpebie ịga leta akụkụ ụwa ahụ, ịnọ n'ụkwụ ya na n'ọnụ ọnụ ya bụ ihe ị na-ekwesịghị ichefuru.
Ha nọ n'ime Kuala Lumpur, isi obodo Malaysia obodo ya bukwara ibu ma di nkpa. Obodo a nwere ihe dịka kilomita 243 na mpaghara ma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 1.8 bi na ya, na-agụta ebe dịpụrụ adịpụ ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ asatọ ọzọ bi. Eziokwu bụ na o toro ogologo oge ụfọdụ ma bụrụkwa otu n'ime ọsọ na-eto eto na Eshia.
Lọ elu ndị ahụ bụ otu n’ime ụlọ kacha elu n’ụwa niile ha wee jide aha ahụ ruo afọ isii, n’agbata afọ 1998 na 2004 kpọmkwem. Ha na-esi n’ala bilie mita 452. Towerlọ elu nke ọ bụla dị ihe dị ka tọn 300, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ enyi 43. E ji ọpụrụiche mara ha Onye na-ese ụkpụrụ ụlọ nke Argentina aha ya bụ César Pelli (bụkwa maka World Financial Center na New York) ma nwee nnukwu njirimara imewe.
Onye na-ese ụkpụrụ ụlọ nke Argentine na ndị otu ya malitere na ọrụ ahụ na mbido 90s ebe ọ bụ na gọọmentị chọrọ ka a rụchaa ọrụ ahụ n'ime afọ isii, ụlọ ọrụ abụọ nke ụlọ ọrụ lekọtara ụlọ elu ọ bụla iche, otu ụlọ ọrụ Japan na nke South-Korea. N'ihi ya, e mesịrị weta ákwà mgbochi ahụ tupu mmalite nke narị afọ. Otu akụkụ na-arịgo n'eluigwe, akụkụ ọzọ na-agbadakwa n'ụwa, ebe ntọala nke ụlọ elu tọgburu ọtụtụ mita, na-atụgharị ha otu n’ime ntọala miri emi n’ụwa.
Ihe owuwu ahụ jidesiri ala ike site na ogidi iri asaa na anọ nke akpọgidere na omimi site n'agbata 104 na 60 mita, nke nwere ọtụtụ puku na cubic mita nke ihe. N'elu ụlọ elu Ala 88 dị elu eji ihe eji eme ka ihe, ihe nchara na iko (ngụkọta nke 33 puku igwe anaghị agba nchara na 55 puku iko ogwe), nke na-agbaso usoro atụmatụ Alakụba dịka ọdịbendị nke mba ahụ si sụgharịa ụdị motto: ịdị n'otu n'ime nkwekọrịta , nkwụsi ike na ezi uche.
Lọ Petronas na eze mepere na 1999 ha na-eguzo n’elu saịtị ebe mbụ enwere ebe ịgba ịnyịnya na-agba. Ọ bụ ihe smart owuwu yana sistemu kọmputa nke na-ejikwa ọkụ eletrik, ọkụ na nche, dịka ọmụmaatụ. Ọ bụ na elu ọnụ ebe ọkụ maka ụgbọelu na ngwa ndozi niile nke ụlọ elu dị. Ngwunye ọ bụla nwere akụkụ nke 23 na mgbanaka nke nwere mgbanaka 14 ndị ọzọ nke diameters dịgasị iche iche.
Ime ụlọ elu na ihe ịchọ mma ha na-agwakwa anyị gbasara ọdịbendị ndị Alakụba na ọdịbendị ndị Malaysia na atụmatụ, eserese na akwa eji achọ mma. Lọ elu nwere 29 abụọ elu na-agba mbuli, mbuli ọrụ isii na ụlọ ndozi anọ. Nke ikpeazụ, naanị maka ndị ọgaranya na ndị nwere mmetụta, kpọrọ gị ozugbo site na ebe a na-adọba ụgbọala na nzuzo nke elu ụlọ elu na 90 sekọnd.
Àkwà mmiri nke na-ejikọ ụlọ elu abụọ ahụ, ndị Ugwu SkyAnyị enweghị ike ichefu banyere ya, ọ bụ akara ngosi na ọ bụ akwa mmiri dị abụọ nke jikọtara n’etiti ala 41 na 42. Ọ dị mita 58 n’ogologo ma kwụgoro 170 mita elu. Ọ na-emeghekwa maka nleta ndị nleta. Ọ bụ ezie na tupu akwụghị ya ụgwọ maka nke ahụ kemgbe 2010, a na-akwụ ụgwọ ntinye. Na mgbakwunye, nke a ụlọ nche dị na ala 86th si Twolọ elu Abụọ ma enwere ike iru ya ebe a site na igwe mbuli na skybridge. Nlele ahụ dị mma.
Otu esi aga ụlọ elu Petronas
Site na ụgbọ oloko: You nwere ike were ụgbọ oloko site na ọdụ ọ bụla n'ime mpaghara ndagwurugwu Klang wee pụọ na ọdụ KLCC.
site na tagzi: ha nwere mita na-adọba ụgbọala ma ha hapụ gị n'ọnụ ụzọ KLCC Suria, ụlọ ahịa na-anọ n'elu ikpo okwu nke ụlọ elu abụọ ahụ ma bụrụ otu n'ime ndị kasị ibu na mba ahụ nwere mita 140 puku.
Bọchị: ụbọchị nleta sitere na Tuesday ruo Sọnde. Emechiri emechi Monday ọ bụla na ememme Hari Raya Aidifitri na Aidiladha.
N’oge: mepere site na elekere iteghete nke ụtụtụ rue nke iteghete nke abalị ọ bụ ezie na ọ mechiri site na 9 ruo 9:1 nke ụtụtụ na Fraịde A na-ahapụ ntinye ikpeazụ na 2:30 pm.
Tiketi. zụrụ n'ogo Mmekọrịta ha wee malite ire ere n’elekere asatọ nke ụtụtụ. Ha nwere oke ma nwee ike ịzụta tupu oge eruo site na weebụsaịtị ụlọ elu. Ọnụahịa nke okenye ọ bụla bụ RM 8 na ndị karịrị afọ 30 na-akwụ RM 80.00.
Na mgbakwunye na etiti ụlọ ahịa, ụlọ elu ahụ nwere mmiri akwarium dị n'okpuru mmiri, ebe sayensị, ebe a na-ese ihe osise na ebe ihe nkiri maka orchestra philharmonic. E nwekwara acre asaa KLCC Park nwere ụzọ ụkwụ maka ije ije ma ọ bụ ịgba ọsọ, isi iyi nwere ngosi ọkụ, ọdọ mmiri na ama egwuregwu.
N'ikpeazụ, Gịnị kpatara eji akpọ ha Petronas Towers? Ị mara? Petrona dị ka aha nne nne m ... mana ọ nweghị ihe jikọrọ ya. Enweghị ntụgharị dịka ọ bụ naanị shortdị mkpụmkpụ nke aha ụlọ ọrụ mmanụ ala mba nke Malaysia, Petroliam Mgbe ụfọdụ. N'ezie, ụlọ elu nke nwere isi ụlọ ọrụ ya biri na Tower One.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Kuala Lumpur » Lọ Petronas